Sivana mpanamboatra sy mpamatsy trano - Sinaina trano fanivanana any Sina
Mba hahafeno ny fepetra takin'ny GMP vaovao, noho izany R & D sy famolavolana NEH series palitao heater elektronika, ny fitaovana dia ahitana fitaovana avo lenta fampitaovana fitaovana sy fanaraha-maso vondrona. Nampiasaina be tamin'ny biotechnology, indostrian'ny pharmaceutika sy electronics izy io, nahazo tombony ara-tsosialy sy ara-toekarena tsara.
TS andiana sivana vy tsy misy fangarony tafiditra ao anaty fiara kely sy miorina iray. Ny tranon'ny sivana dia misy fisokafana ambony sy ambany ary fanokafana havia sy havanana karazany roa. Ny cartridges dia mampiasa sivana titanium sintered, ny mpampifandray mahazatra dia misy visy 226 ary visy M20, ny famaritana manokana dia afaka mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa hamolavolana sy hamboarina.